Isaga Oo Ka Hadlaya Shirkii Golaha Ammaanka Ee Soomaaliya, Ergeyga Gaarka Ah Ee Qm Waxa Uu Bidhaamiyey Xiisadaha Siyaasadeed Iyo Baahida Loo Qabo Wadaxaajood | UNSOM
10:23 - 25 Feb
Dadaaladan waxaa ka mid ahaa shir ay isugu yimaadeen hoggaamiyeyaasha Dowladda Federalka Soomaaliya iyo Dowladaha Xubnaha ka ah DFS caasimadda Dowlad Gobolleedka Galmudug ee Dhuusamareeb 2-dii ilaa iyo 6-dii Febraayo. Horumarro ayaa laga sameeyey balse ma jirin heshiis kama dambeys a oo la gaaray qodobadii aadka loogu muransanaa - kuwaas oo ay ka mid yihiin dhismaha gudiga maamulaha doorashada, qaabka loo soo xulayo xubnaha Somaliland ku matalaya hay’adaha Dowladda Federalka iyo mamaulka doorashooyinka Gobolka Gedo eek a tirsan Dowlad Gobolleedka Jubaland.
Toddobaadyadii tagay, saaxiibada caalamka waxa ay sheegeen in aysan jiri Karin doorasho hal dhinac ah, habraac barbar yaac ah iyo go’aan hal dhinac ah ay gaaraan hoggaamiyeyaasha Soomaalida - iyo midda ugu muhiinsan, in aysan jirin ficillo horseedi kara kala qeybsanaan intaas ka badan iyo halis keeni karta iska horimaad.
* Hadal-jeedintii Ergeyga Gaarka ah oo dhammeystiran waxaad ka aqrisan kartaa halkan.
 Bayaan loo nisbeeyay Afhayeenka Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay oo ku aaddan Soomaaliya